Windows 10 ကိုအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း
27.06.2018 မှာ Windows | အရင်ကဆိုရင်များအတွက် | အဖြစ်မကြာမီအပေါငျးတို့သ control panel ကိုမှန်ကန်စွာ Apps ကပက Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်၏ဤအစိတ်အပိုင်းသို့ get အဖြစ်, ပရိုဂရမ် Windows 10 ကို၏ installation နဲ့ဖယ်ရှားရေး၏တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ပေးထားသောညွှန်ကြားချက်၌တည်၏။
မင်္ဂလာနယူး 2014 တစ်နှစ်တာ! ငါလက်ဆောင်တွေပေး။
ငါလက်ဆောင်တွေ၏ဖြန့်ဝေ၏ရလဒ်များကိုရတဲ့ငါ! (သူတို့ကိုငါနှင့်ကနဦးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား၏စာသားကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်အမျှဒီစာသားကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှိပါတယ်) ။ ထူးဆန်းပေမယ့်မှသာလူသုံးယောက်လက်ဆောင်တစ်ခုရချင်, FeedBurner စာရင်းဇယားဖြစ်သော်လည်း 50 ကျော် subscriber များအားဤဆောင်းပါးကိုထုတ်စစ်ဆေးထံသို့လာကြပါပြီ။ အဆုံးမှာတော့ကျွန်မမူလကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနှစ်ဦးလက်ဆောင်တွေကန့်သတ်ခံရဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, စာဖတ်သူတွေ၏လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိရန်လိုခငျြသမြှသောသုံးစာအုပ်တွေပေးရ: Sergei မိုက်ကယ် Kofler စာအုပ် - Linux ကို။
ဤတွင် operating system ကိုစနစ်ပြန်လည်နာလန်ထူ, ပြဿနာဖြေရှင်းနှင့်အခြားတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအတွက်တပ်ဆင်ခြင်း, configuration များ, စစ်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း Windows7နဲ့ Windows 8.1 များအတွက် site ၏အပေါငျးတို့သညျအခွခေံ contents တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ သီးခြားစာမျက်နှာတွင် - Windows မှာအရေးကြီး 10 ညွှန်ကြားချက်များ: Windows 8 မူရင်းက ISO image ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုသိရန်အသုံးဝင်သည်အရာသည် Windows 8.1 မြှုပ်ထားသော system utilities က Windows 10, 8 နဲ့ Windows 7, Install လုပ်ပါ။
Router ကိုဖွင့်သတ်မှတ် 25.12.2012 | မနေ့ကတရားဝင်ရုရှားက်ဘ်ဆိုက် D-Link ပေါ်တွင်သတင်း ftp.dlink.ru ver Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-300 NRU ဟာ့ဒ်ဝဲတည်းဖြတ်မူများကိုများအတွက် firmware ကိုအသစ်ဗားရှင်းထွက်ချထားခံခဲ့ရသည်။ ခ 5, B6 ဟာနှင့် B7 ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိ firmware ကိုဗားရှင်း: 1.4.2 - ထို DIR-300 B7 1.4.4 ဘို့ - ထို DIR-300 ခ5အဘို့နှင့် B6 ဟာ (ယခု5နှင့် B6 ဟာများအတွက်တူညီသောဖိုင်) firmware ကိုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက် interface ကို setting များကို panel ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများ 1 ။
အဘယ်မှာရှိ Crysis3ညာဘက်အဘို့အဖိုင်ကို aeyrc.dll ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
ဒါကြောင့်ဂိမ်း Crysis3start ပါဘူးနှငျ့သငျအမှားခံလျှင်ထို program ၏ပစ်လွှတ်လိုအပ်သော aeyrc.dll ဖိုင်ကိုငါက fix လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့သင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟုဒီမှာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မတည်ရှိပါဘူးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းသိရသည်။ အလားတူပြဿနာ: သင်ဘယ်မှာ aeyrc ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရှာဖွေနေ start အကယ်. cryea.dll Crysis3ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
«ဖျအမှား» - unexplained ကွန်ပျူတာပြဿနာများကို
ငါကြိုးဖတ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို Komsomol အမှန်တရားများ၏အဆင့်မှာသင်တန်း၏ဆောင်းပါး, ဒါပေမယ့် Dzhakisa စတီဖင် (စတီဖင် Jakisa) မိမိကွန်ပျူတာနှင့်လေးနက်သောပြဿနာများရှိခဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအ-လူတစ်ဦးသေနတ်သမား, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ရာအရပ်ကိုကြာသည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု - သူ Battlefield3ကိုထားသောအခါသူတို့ကစတင်ခဲ့သည်။
အဘယ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ vorbisfile.dll ကြောင့်တပ်ဆင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
သငျသညျချင်ဖိုင်ကို vorbisfile.dll နှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့အမှားက Windows 7, Windows 8 နဲ့ XP မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါ, သင်ကွန်ပျူတာထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, vorbisfile.dll ပါဘူးအကြောင်းမူကား, ထို program ကို run မရနိုင်သည်ကိုဖျောပွ operating system ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုပါလျှင် (သင်ကတခြားအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းကို run တဲ့အခါမှာအမှားပေါ်လာနိုင်ပါသည်သော်လည်းဥပမာ, Homefront) GTA စန်း Andreas ကို run ။
Sony Vaio အပေါ်ယာဉ်မောင်း Installing
03.03.2013 လက်ပ်တော့ | အထွေထွေ | အသုံးပြုသူများသည်ကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့မျှမျှတတသေးအဖွဲတာဝန် - Sony Vaio လက်ပ်တော့ပေါ်မှာရှိသမျှစနစ်ကယာဉ်မောင်း Install လုပ်ပါ။ ကူညီဖို့ - Vaio များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install အဘို့အဘယ်သို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းပြောပြအများအပြားဆောင်းပါးများ, သောကံမကောင်း, အစဉ်မပြတ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Torrent - အသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်
ဒီစာမျက်နှာတွင်, ထို site remontka.pro ထံမှအပေါငျးတို့သဆောင်းပါးများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုစုဝေးစေပါလိမ့်မည်ရေစီးခြင်းကြောင့်ဒေါင်းလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သော, torrent tracker တွင်, သော BitTorrent ဖိုင်ခွဲဝေမှုနှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်။ BitTorrent ဖိုင်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်တစ်ဦး torrent tracker နှင့် torrent client ကိုကြောင်းအရင်ကဆိုရင်များအတွက်ညွှန်ကြားချက် - torrent နှင့်မည်သို့အသုံးပြုဘာလဲ။
မကွန်ပျူတာမှာလုံခြုံဆုံးအလေ့အကျင့်အလုပ် - သငျထူးဆန်းတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောခလုတ်နှိပ်သည်ကိုသင်တို့သိသလား? အတော်များများကကွန်ပျူတာပြဿနာများ, ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်တူသောရုံအလွန်အကျွံသိချင်စိတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကောင်းပြီ, ငါအလှည့်အတွက်, ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်စာဖတ်သူတွေပဲစပ်စုသောအရာကိုရာခိုင်နှုန်းရရှိမည် (သင်ကသင်၏ရှာဖွေရေးကနေရလျှင်, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်ဆောင်းပါးလျှို့ဝှက် key ကိုတံဆိပ်ကပ်တဲ့ခလုတ်ကိုကြောင်းပြောပြ) ။
သင်ကစားပွဲစတင် d3dx11_43.dll အမှား (ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရပ်၌များမှာတစ်ချိန်ကကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ခန့်မှန်း), သငျသညျ dll- ဖိုင်တွေနဲ့တူဆိုဒ်များတွင်ရဖို့များပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော "အခမဲ့ d3dx11_43.dll ကို download လုပ်ပါ" အဖြစ်တောင်းဆိုမှုပုံပေါ်ဘူးဆိုရငျ, ဖိုင်ကို download, ဖိုင်တွဲကို C ထဲမှာထည့်သွင်း: System32 ... နှငျ့သငျနေဆဲအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
လွတ်လပ်စွာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Anti-virus များဖယ်ရှားရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်မည်သို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင် flash drive ကိုကုသမှုအဖြစ်, malware နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ဆက်စပ်သောအခြားအလက်စွဲဖယ်ရှားပစ်ရန် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်စစ်ဆေးဘယ်လိုကြော်ငြာတွေကို built-ဖယ်ရှားရေး utility ကို Google Chrome က Malware နှင့်အတူ browser ကိုဖွင့်လှစ်သူ့ဟာသူအကောင်းဆုံးက Windows 10 Antivirus ကို (အခမဲ့နှင့် paid နှစ်ဦးစလုံး) ကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus ကို browser ကို Pop-up အတွက်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားရန်ကဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ malware ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲလျှင် တစ်ဦး stand-alone Windows Defender 10 (Windows Defender ကိုအော့ဖ်လိုင်း) အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လို Hybrid ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိနှင့်အလားအလာမလိုချင်တဲ့ software ကိုအွန်လိုင်းစစ်ဆေးမှုများဖိုင်များကိုရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန် RogueKiller ဗိုင်းရပ်စ်အသုံးပြုခြင်း Windows ကို 10 ဘစ်ဒဖန်ဒါအခမဲ့ Edition ကိုအတူ funday24 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို။
Windows ကို 10 - အားလုံးညွှန်ကြားချက်
တပ်ဆင်ခြင်း, မွမ်းမံ, configuring, ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို - ဤစာမကျြနှာကို Windows 10 ရက်တွင်အားလုံးအရေးကြီးသောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ စာမျက်နှာအသစ်ကညွှန်ကြားချက်အဖြစ် updated ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်စွဲလျက်, operating system ကို၏ယခင်ဗားရှင်းအပေါ်ဆောင်းပါးများကိုလိုအပ်လျှင်, သင်ကသူတို့ကိုကဒီမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ upgrade ချင်ပေမယ့်အချိန်မရှိဘူးဆိုပါက: ဇူလိုင်လ 29, 2016 တွင်အပြီးအခမဲ့အဆင့်မြှင့် Windows 10 ကိုရဖို့ဘယ်လို။
အဘယ်မှာရှိ mfc100u.dll ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး startup မှာပြဿနာ fix မှ
ဒါဟာသင်က Windows အမှားထင်ရှားပြီဟုယူဆထားရပါမည်: ကွန်ပျူတာဖိုင် mfc100u.dll ပါဘူးသကဲ့သို့, အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါလို့မရပါဘူး။ ဒီနေရာတွင်ကဒီအမှား fix ဖို့နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာသင်မေးခွန်းထုတ်စရာက်ဘ်ဆိုက်များအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည် (နှင့်သငျသညျတံ့သောအရာကိုမသိကြပါ: (စတာတွေက Windows7နဲ့နီရိုဆော့ဖျဝဲတစ်ဘုံပြဿနာ, Anti-virus ကို AVG,) အပေါင်းတို့၏ရှေးဦးစွာငါအဲဒီ DLL သီးခြားစီရှိရာတစျခုမရှာသင့်ကြောင်းသတိပြုပါချင် mfc100u ၌တည်၏။
Bug တွေကို fix ဖို့ကိုဘယ်လို physxcudart_20.dll
သင်သည်မည်သည့်ဂိမ်းကို run ပါလျှင် (အတိတ်ကာလကနေ - က Borderlands) အမှားအစီအစဉ်ကိုမစတင်နိုင်မအသိပေး, ပေါ်လာတဲ့ကွန်ပျူတာအလိုရှိသောမဟုတ်သည်ကို ထောက်. , ဘယ်မှာ physxcudart_20.dll ကို download လုပ်ပါရန်, မရှာပါဘူး, အမှားအများကြီးလွယ်ကူသည်ကို fix ။ physxcudart_20.dll ဖိုင် Nvidia PhysX နှင့်အတူမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကအမှား physxloader ပြင်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့, ကြောင်း PhysX အမှားတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည် (တညျ့မပေးပါ။
29.12.2018 မှာ Windows | Windows Registry ကို - operating system ရဲ့အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဟာဒေတာဘေ့စစနစ်နှင့်အစီအစဉ်ကို parameters တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ OS က updates များကို, ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်, အသုံးပြုမှုလိုသလို, "သန့်ရှင်းရေး" နှင့်အချို့သောအခြားအသုံးပြုသူများ '' လုပ်ရပ်များတစ်ခါတစ်ရံစနစ်၏ချွတ်ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် registry ကိုပြောင်းလဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
(ရုရှား Skype ကိုတွင်သို့မဟုတ်) Skype ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများဖလှယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများမခေါ်နိုင်ပါ။ ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်တွင်, ငါ Skype ကိုအသုံးပြုမှုအားလုံးရှုထောင့်အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ရေးသားဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည် - အလွန်မကြာခဏဤအစီအစဉ်ဝေးသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကွန်ပျူတာနှင့်အရာခပ်သိမ်းထံမှဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်သူတွေကိုအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ် msvcp110.dll - ပြဿနာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို
သင်သည်မည်သည့် program ကို run နှင့်ထို့ထက် ပို. ဆိုပါက - ဥပမာအားကစားနည်းများ, Battlefield4နဲ့မြန်နှုန်းပြိုင်ဘက်များအတွက်လိုအပ်ကွန်ပျူတာ msvcp110.dll ပါဘူးသို့မဟုတ် "လျှောက်လွှာသောကွောငျ့စတင်ရန်နိုင်ခြင်းကြောင့်, သငျသညျ, ထို program ကို run မရနိုင်သည်ကိုဖျောပွတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှု MSVCP110.dll "မတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ကသင်ဘယ်မှာဖိုင်ကိုနှင့်အဘယ်ကြောင့် Windows ကိုကမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းသတင်းပေးပို့ကိုရှာဖွေ, ရှာကြသည်ကိုခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသည်။